Top 6 eBook Shabakadaha in Free Download eBooks
> Resource > Top List > Top 6 eBook Shabakadaha in Download Free eBooks
Ma doonaysaa in la helo buugga, sidoo kale buugaagta ama eBook, si fiican u online? Halkan ka "si hufan" macnaheedu gudahood hal daqiiqo natiijooyinka hesho. Si aad u hesho macluumaadka faahfaahsan iyo qanco oo ku saabsan buug aad u baahan tahay, inaad si fiican u lahaa inay jartaan matoorada raadinta halkii tag dukaanka buugga si toos ah, waayo, waxaad is barbardhigi kartaa natiijada ka matoorada buug raadinta hor aad iibsatay noqon. Halkan qodobkan, aan soo bandhigno 9 Search matoorada eBook kaa caawinaya in aad u astaysto buugga baadhi karo.
BookFinder aad bixisaa xulashada ugu wanaagsan ee ay barbar dhigo qiimaha ka badan 150 milyan oo buugaagta on sale. New, isticmaali, dhif ah, buugaagta, out of print iyo buugaagta caalamiga ah ee ku qoran 6 luqadood (Ingiriis, Holland, Faransiis, Isbaanish, Talyaani, iyo German) waa laga raadin karo.
Scribd waa eBooks ah iyo matoorada PDF raadinta, kuwaas oo eBooks marti goobaha. Dadka geliyaan laga yaabaa wax kasta oo halkan. Sidaas darteed haddii aad u baahan tahay buugaan yar, buugaga, maqaalo, majaladaha ama xitaa dib, waxaad iyaga ka Scribd ka heli kartaa. Inta oo dhan oo iyaga ka mid yihiin arki iyo soo bixi.
Shelfari waa kooxda Kitaab, kuwaas oo aad ka heli kartaa buugaag aad xiisaynayso iyo buugaag wanaagsan la wadaag saaxiibadaada. Waa ka badan ama ka yar sida shabakad bulsho. Waxaad ka akhrisan waxa aad jeceshahay iyo in la abuuro aad guugta dalwaddii u gaar ah kaas oo buugaag aad akhriday.
Biblio waa sida BookFinder. In this site, waxaad ka heli kartaa dhif ah, oo raqiis ah, buugaagta cusub ee la sii daayay.
BookArmy - BookArmy waa meel aad sahamin karaan buugaag wanaagsan, uploading buugaagta kuu gaar ah. Waa maxay more cajiib ah waa in ay kaa caawin karta in aad u daabacaan buugaag adiga kuu gaar ah, sida uu sheegay in "bulshada An online daahfurka meesha qorayaasha noqon qorayaasha". BookArmy kale oo ay bixisaa talooyin qoraal ah. Oo waxaa jira gole iyo blog, halkaas oo aad kula xiriiri kartaa buug ku caashaqi jiray.
BigBookSearch - BigBookSearch arrin ka duwan matoorada kale buug raadinta. Isla marka aad u tag goobta, waxaad noqon kartaa dhicin by homepage ee goobta. Daboolida Book halkan mid soo bandhigay mid ka mid. Riixaya badhanka saraysa, waxaad ka arki kartaa, kuwaas oo daboolida qurux badan. Haddii aad jeclaan kasta oo iyaga ka mid ah, guji ku yaal, waxaad u geli kari waayay Amazon.
Kuwaasu waa eBooks caadi ahaan loo isticmaalo marti goobaha. Hubi in aad ku socoto in la helo eBooks aad u baahan tahay oo ku saabsan internetka ee kor ku qoran, waxaan ahay. EBooks Online inta badan qaabka PDF. Haddii aad rabto in loogu badalo PDF in EPUB eBook, isku day qalab xirfadeed EPUB, Wondershare PDF to EPUB Converter . Just dajiyaan PDF files oo riix badhanka badalo si loo badalo PDF in EPUB.
Isku day PDF to EPUB Converter lacag la'aan ah!